Ukuphindaphinda okanye Awuphindaphindi? - Iingcali ze-Semalt, u-Natalia Khachaturyan Uyaziphendulela!
Umxholo wokuphindaphinda unyuse ukudideka phakathi kweengcali ze-SEO ngexesha elide. Ivakalelwa ngathi i-SEO bugbear kufuneka isuswe ngenye indlela ingenza ukuba indawo yakho isuswe kwindawo yokubeka. Nangona umxholo wokuphindaphindiweyo uza nehlwayo, kukho indlela iGoogle isebenzisa ngayo i-algorithm yokuqinisekisa ukuba izinto eziphindiweyo azichaphazeli amanye amaphepha kwisayithi lakho.
Umgcini weComment uSemalt , uNatalika Khachaturyan, uxelela ukuba i-Google ayifaki umxholo wokuphinda unikwe elinye iphepha elinomxholo ofanayo owaziwayo kwiwebhusayithi. Ukuba iwebhusayithi yakho inamaphepha amaninzi kunye nomxholo ofanayo, i-Google iza kunzima ukukhetha indlela efanelekileyo. Kuya kubonisa kuphela enye inguqu yomxholo kwimiphumo yokukhangela, kwaye ezinye iinguqulelo zifihliwe - vv battery cheap. Uninzi lweengcali ze-SEO lubona oku njengesihlwayo. Izinto ezintathu zenzeka kwimeko enjalo:
I-Google ayilungisi iphepha;
Ubunzima belo phepha alunanto;
Indawo iya kuphawulwa njengomthombo onokwethenjelwa womgangatho kunye nomxholo okhethekileyo;
Oku kunika i-webmasters isizathu sokuba uzive ngathi kuyisohlwayo, kodwa kubalulekile ukwazi ukuba oku akuzona zonke iinjongo zophando kufuneka zijongane nazo. Kukho izicwangciso ezininzi ezisetyenziswe ngokubhaliweyo, kodwa akuzona zonke izinto ezinomdla kubasebenzisi bewebhu kunye nabaphandayo.
Kukho amaninzi amanxibelelwano asetyenziswe kumawebhusayithi ngokukhethekileyo ukuphinda aphindwe ngokuphindaphindiweyo kunye nethemba lokuba oku kungathatha indawo yokukhangela. Akunakutshitshiselwa ukungongeza nayiphi na ixabiso kwisayithi, kwaye ngokubanzi, ayifaki ixabiso. Kufuneka uqwalasele ubunzima bomxholo wokuza nesicwangciso sokwazi apho i-injini yokukhangela ingaphumeleli. Kukho iintlobo ezininzi zezinto eziphindiweyo ezibandakanya:
Njengomnini wendawo, unokufumana umxholo obalulekileyo kwenye iwebhusayithi..Emva kokufunda umxholo, uziva ukuba ufuna ukuwabelana ngawo kwiwebhusayithi yakho. Nangona kunjalo, le nto ayilona ngcamango efanelekileyo, njengoko le nto ayikho imvelaphi yakho yangaphambili kwaye ayiyi kuxabiseka. Ekugqibeleni, ukuqhuba okunjalo kunokukhokelela ekuhlaleni ngokubanzi kumgangatho wesizinda webhusayithi yakho.
Indlela efanelekileyo yokulungisa le ngxaki isebenzisa itekisi ye-cross-domain yesigxina. Yongeza ukuba ubonise ukuba umxholo wasezantsi usebhusayithi ehlukileyo. Iinjini zokukhangela ziya kukwazi ukuba umxholo ukopishwe kwaye kwisayithi yakho ngenjongo.
Kufuneka uqaphele ukuba kulo meko lonke ubukhulu bekhonkco luya kumthombo womxholo. Ngale ndlela, ukuba usebenzisa izibanisi ezininzi, uza kugcina ipesenti encinci yesisindo. Ukuba abantu bathanda umxholo, inani lamaxesha a tyelela isayithi lunokugqithisa ukwehla kwiphepha lekhasi.
Iinkcukacha zeemveliso eziphindaphindiweyo
Thatha imeko apho unayo inkampani efumana imikhiqizo evela kubakhiqizi abahlukeneyo. Uzakufuna ukufumana ulwazi olufana neenkcazo, ama-specs, kunye nemifanekiso ukuyibeka kwisayithi yakho. Uya kunika ulwazi oluchanekileyo olunikezwa ngumenzi.
Indlela yokuyilungisa: kuya kufuneka ubeke iwebhusayithi yakho ngaphandle. Uzakufuna ukuphinda ubhale kwakhona iinkcazo kunye nokuthumela izithuba ezikhethekileyo zemveliso yakho, ongayifumana kwizinye iisayithi ezifana nokuhlaziywa komkhiqizo.
Ukungalungi: isicwangciso sinokuchitha ixesha njengoko kufuneka uqoke ulwazi oluncedo ukuchaza imveliso.
Izintlu zemveliso ezininzi
Oku kuquka ukuveliswa kwe-URL okanye ukuba isayithi lakho linamaphepha amaninzi achaza iimveliso eziphambili.
Indlela yokulungisa umba: umzekelo, ukuba ujongana nezinto ezinhlanu kwaye uvelise i-URL entsha xa uhlela umcimbi mhlawumbi ngobukhulu kunye nentengo endaweni ye-alfabhethi, uya kuba namanani ambalwa anomxholo ofanayo kwii-URL ezahlukeneyo.
Umxholo wokuphindaphinda unokuxinzelela. Ukuba uyayazi ingxaki ngokukhawuleza, iya kukunceda ukuyixazulula ngaphambi kokuchaphazela ukuma kwakho. Uya kuba nako ukuza nezicwangciso malunga nendlela yokuqinisekisa ukuba isisindo sidlula ngokuphindaphindiweyo asinayo impembelelo ebalulekileyo kwindawo yakho. Izisombululo kule miba zingadla ixesha, kodwa zifanelekile ixesha njengoko zinceda ekuveleni i-ROI ephakamileyo kunye nokutyelela kwiwebhusayithi yakho.